China Corneal topographic mufananidzo dijitari system chishandiso sw-6000 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Corneal topographic mufananidzo dijitari system chishandiso sw-6000
Iyo corneal topograph ine zvikamu zvitatu: lPlacido disc projekti system: 28 kana 34 zvindori zvakaenzanisirwa pamusoro penzvimbo yemukati kubva pakati kuenda padivi, kuitira kuti iyo cornea yese iri mukati meyekuongorora huwandu hwakaomeswa fungidziro. AlReal-nguva mufananidzo yekutarisa system; iyo mhete yemufananidzo inoratidzwa pamusoro penzvimbo yepamusoro inogona kucherechedzwa, kuongororwa uye kugadziridzwa mune chaiyo-nguva kuburikidza neicho chaicho-nguva mufananidzo wekutarisa system, kuitira kuti iyo corneal mufananidzo inogona kutorwa mune yakanakisa mamiriro, uye wozochengeterwa kuongororwa. ③Computer, mufananidzo kugadzirisa system; komputa inotanga digitize mifananidzo yakachengetwa, inoshandisa mafomula akaverengerwa uye zvirongwa zvekuwongorora, uye zvobva zvaratidza mhedzisiro yekuongorora pachiratidziri chemagetsi nemifananidzo yakasiyana-siyana. Panguva imwecheteyo, iyo yakaverengerwa manhamba ehuwandu akawanikwa aripowo pamwe kuratidza.
Iyo corneal topography ndeye kuongorora iyo yese corneal pamusoro. Imwe neimwe yekuratidzira mhete ine mazana maviri nematanhatu emapoinzi akaisirwa mune yekugadzirisa system. Naizvozvo, iyo cornea yese ine anopfuura e7000 data mapoinzi akapinda mune yekuongorora system. Izvo zvinogona kuoneka kuti iyo corneal topography yakarongeka, yakarurama uye chaiyo. Corneal topography inoshandiswa kiriniki kuti iongorore corneal astigmatism, yakawandisa ongorora zvivakwa zvemakona, uye kuratidza kukona kwekona mumadhata kana mavara akasiyana. Musiyano uripo pakati pemaviri-axis kutenderera ndeye corneal astigmatism. Kuona isina kujairika corneal kuruka, kuuya kwemakoronyera mepu kunoita kwekutanga kuongororwa kwekeratoconus uye keratoconus mune subclinical danho rinokwanisika, uye iko kurongeka kwekuongororwa kwekeratoconus kwakakwira se96%. Uye zvakare, inogona kushandiswa kuongororwa kwekukanganisa kwema corneal kunokonzerwa nema lenses.
Iyo corneal topograph SW-6000 inoshandisa PLACIDO koni, 31 zvindori, 7936 mapoinzi akazara. Inoshandiswa mukuongororwa kwekiriniki yeacneal astigmatism kuburikidza nekomputa yekuongorora, kuwongorora chiyero chemakona, kuratidza simba remakona rekutsvaira mumadhata kana mavara akasiyana, uye kuratidza mepu yakakomberedzwa, axial mepu yekukomba, mepu yekukwirira, mifananidzo yegirazi yekoni uye cornea 3D kudhirowa. Inogona kushandiswa preoperative bvunzo uye postoperative ongororo ye corneal refractive kuvhiyiwa, inogona kutungamira iyo data yekupfeka yekubatana lens, uye nekuvandudza iko kurongeka kwekubata lens kwakakodzera.
1. Nzira yekuyera:
2. Kuyera kufukidza:
3. Kuyera huwandu hwenzvimbo ye curvature:
5.5mm-10.0mm (61.36 D-33.75D)
4. Kuyera kutsauka:
5. Placido mhete nhamba:
6. Nhamba yenhamba dzekuyera:
7.Inogona kuratidza axial kukomberedza mepu, tangential curvature mepu, kureba mepu, simulated corneal girazi mufananidzo uye corneal 3D mepu
8. Yemhando yepamusoro mhando inkjet purinda inoburitsa mufananidzo
9. Muedzo wekugadzirisa musoro renji: anopfuura 86mm kuruboshwe uye kurudyi; zvinopfuura 40mm kumberi uye kumashure; zvinopfuura 30mm kumusoro uye pasi; zvinopfuura makumi mashanu emamirimita ebraya rekutsigira;
10. Bata lens kugadzirisa basa
11. Keratoconus kuona basa
Pashure: Yakakwira-chaiyo kuyera kuyera rebound tonometer SW-500
Zvadaro: Ophthalmology AB Ultrasound Kuongorora Zvishandiso (AB)
Ophthalmology Midziyo Mugadziri
Ophthalmology Chishandiso China Fekitori
Ophthalmology Chishandiso Mugadziri
YZ24 Strip Retinoscope & AC mhando ubvise ret ...
Kwete-mydriatic + Contrast Yakabatanidzwa Dhijitari Kunakidzwa ...
Ophthalmology optical kubatana kwe tomography scan ...